Gbasara Anyị - Lipu Hometime Household Products Co., Ltd.
Ndị na-akwụ ụgwọ na-adịgide adịgide
TPR Ndị Na-enweghị Ihe Mgbochi
ABS Rubber Agba hang
Pee ntekwasa Hangers
Cokwanyere ntekwasa Hangers
Ihe nkedo Akpadoro
Lipu Hometime Ezinaụlọ Products Co., Ltd. bụ ọkachamara ezinụlọ ihe emeputa dị na Lipu, Guilin, Guangxi, China.
Anyị Hometime factory guzo ọtọ na elu mma na zuru ezu mmepụta akara nke dị iche iche ihe n'ụlọ ihe. Anyị nwere ihe dị ka afọ iri atọ ma nwee osisi atọ na-ekpuchi mita 38000 niile na ụlọ ọrụ ọhụụ na iji igwe eji arụ ọrụ na akpaghị aka.
Ike mmepụta kwa afọ anyị bụ ihe dị ka nde 20 PC - 30 million pcs. Na ọtụtụ ngwaahịa plastik dị ka pp hangers, abs roba sere hangers na Eco enyi na enyi ọka wheat ahịhịa hangers, biodegradable hangers, TPR na-abụghị ileghara hangers, velvet hangers na metal ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka Rubber ese hangers, Pee ntekwasa hangers, Braided eriri hangers, ịkwanyere hangers, ọla kọpa hanga, Aluminium hangers, ịchafụ nhazi na osisi ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka osisi hangers maka customizing, nkwari akụ, retails; Laminated hangers na skirts ogologo ọkpa hangers.
N'ime ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi 200 na ihe karịrị ndị ọrụ aka ọrụ 40 maka njikwa. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị Hometime factory support Custom iji, otú OEM ODM iwu niile na-anabata. Ngwaahịa anyị bụ nhọrọ dị mma maka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ejiji, ndị ọchụnta ego n'ịntanetị, ezinụlọ na ime ụlọ ịsa akwa.
Anyị enwetala asambodo dịka BSCI / ISO9001 / FSC. Na-ere nke ọma na ahịa ụlọ ma na-ebupụkwa ndị ahịa na USA, Europe, Russia, Japan, South Korea wdg.
Adgbaso ụkpụrụ azụmahịa nke uru abụọ, anyị nwere aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị n'ihi ngwaahịa anyị dị mma, ọnụ ahịa asọmpi na nnukwu ọrụ. Anyị imewe otu nwere ike na-akwado ndị ahịa anyị ka gị customizing aghụghọ dị ka gị mkpa, Hometime enye unrivaled ahịa ọrụ. Obi ụtọ na-abịa na Oge obula.
ỌZ FREE KWES FREER FREE N'FREELỌ 008613580465664
Adreesị Jinniu Industrial Park, Licheng Town, Lipu County, Guilin, Guangxi, China
Copyright - 2015-2025: All Rights echekwabara.